Thingyan Feeling | TechSectors
9:19 PM LeaveaComment
သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ တည်းက သင်္ကြန်ကို ဘာမှန်း မသိခဲ့တာ ခုချိန်ထိလည်း ဘာမှန်း ခံစားခွင့် မရခဲ့ဘူး - သင်္ကြန်ဆို ဒီလိုပဲ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဟိုငေး ဒီငေးနဲ့ တစ်ယောက်တည်း ခပ်ဆွေးဆွေးပဲ နေဖြစ်ခဲ့တယ် - လူဖြစ်ကြတာချင်း တူပေမယ့် ခံစားခွင့် မတူကြတဲ့ သူတွေ - ကိုယ့်အတွက် အခွင့်အရေး မရှိပေမယ့် သူတို့အတွက် အခွင့်အရေး ရှိနေကြတာတွေ တွေ့ရရင် ဘဝဆိုတာ စချိန်ကတည်းက သမာဓိ မရှိတဲ့ လျှာတစ်ဖက်စောင်း ချိန်ခွင်ထဲမှာ ကိုယ့်ကို ထည့်ချိန် ခံနေရသလိုပဲ ခံစားရတယ် -
ဘယ်သူတရားပျက်ပျက် ကိုယ်မပျက်နဲ့ ဆိုတဲ့ စကားက လူသားဆန်ချင်တဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက် အချိန်တိုင်း လက်ကိုင်ထားနိုင်ဖို့ သေချာလို့လား ?? ကိုယ်သေလောက်အောင် ကြိုးစားလည်း မရလာခဲ့တဲ့ အရာတွေ - တစ်နေလုံး တစ်ညလုံး ကုံးရုန်းရှာတာတောင် မိသားစု ထမင်းနပ်မှန်နိုင်ဖို့ မကာမိနိုင်တဲ့ သူတြွေကားမှာ သူတို့ ဘယ်လောက်ထိ တင်းခံနိုင်မှာလဲ - ကျုပ်ကော ဘယ်လောက်ထိ တင်းခံနိုင်မှာလဲ - လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်ကို ပတ်ဝန်းကျင်က ဘောင်ခတ်တယ် - လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရပ်တည်ခွင့်ကို ပြဌာန်းချက်တစ်ချို့က တုပ်နှောင်တယ် - လူဆိုတာ မွေးလာကတည်းက ငါကြီးလာရင် မကောင်းတာ လုပ်ပြီး ဗီလိန် အကြီးစားဖြစ်ရမယ် - ဂျပိုး သူခိုး ဖြစ်ရမယ်လို့ ဦးတည်ချက် ထားတဲ့သူ တစ်ယောက်မှ မရှိကြဘူး - အားလုံး လူတော် လူကောင်းတွေ / ပညာရှိ ပညာတတ်တွေ / အများအကျိုး သယ်ပိုးနိုင်သူတွေပဲ ဖြစ်ချင်ခဲ့ကြတာပဲ - ဒါပေမယ့် -
ရောမရောက်ရင် ရောမလို ကျင့်
သူများ မိုးခါးရေ သောက်ရင် ကိုယ်လည်း လိုက်သောက်
ဆိုတဲ့ စကားတြွေကားမှာ ပညာတတ်တွေ ပညာမဲ့ကုန်ကြတယ် - ပညာမဲ့တွေ သူခိုး - ဂျပိုးနဲ့ ဗီလိန်အကြီးစား ဖြစ်လာကြတယ် - ဒီစကားတွေကို ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဥပမာပေး ပြောခဲ့ကြတယ် ဆိုတာ ကျုပ် ကောင်းကောင်း မသိပေမယ့် ကျုပ်သိထားတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်ကတော့ သေလောက်အောင် မုန်းစရာ ကောင်းတယ် - ဒါပေမယ့် ကျုပ် ဘယ်လောက် မုန်းနိုင်မှာလဲ - ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက် မုန်းမုန်း သောက်တဲ့ သူတွေကတော့ ပြည့်နေတာပဲလေ - နောက်ဆုံး မသောက်ချင်တဲ့ လူတွေပဲ လွင်တီးခေါင်ပြင်ထဲမှာ ကယ်သူမဲ့ပြီး ကျန်ခဲ့ကြတယ် - အချိန်တန်တော့ အဲ့လိုလူတွေလည်း သေကြကျေကြ - ဘယ်လိုလူတွေ ဘယ်လိုပဲ သေကြကျေကြ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရော ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ မိုးခါးရေ သောက်တဲ့ လူတွေကတော့ ခုချိန်ထိ အသက်ရှင်နေခဲ့ကြတယ် - ဘဝတစ်ခု တည်တံ့မှုမှာ ရပ်တည်ရှင်သန်မှုက ပိုပြီး အရေးကြီးတာ မို့လို့ နောက်လူတွေကလည်း မိုးခါးရေ သောက်သူတွေကို အမှန်လို့ ယူဆတယ် - လွင်တီးခေါင်ပြင်ထဲက လူတွေလို ငမိုက်သားတွေလို့ အပြစ်တင်တယ် - အဲ့ဒီ့ ပြစ်တင်စကားတွေ ကဲ့ရဲ့ရံှု့ချမှုတွေရဲ့ ကြားမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘာလုပ်နေမှန်း ဂဃနဏ မသိကြတဲ့ လွင်တီးခေါင်ပြင်ထဲက လူတစ်ချို့ လူမသိအောင် ခါးကြားထဲ ဖွက်ပြီး ယူလာတဲ့ မိုးခါးရေဗူးကို မှောင်ရိပ်ကွယ်ပြီး ထုတ်သောက်ကြတယ် - အဲ့လိုနဲ့ မိုးခါးရေ သောက်သူ နဲ့ မိုးခါးရေ မသောက်သူ ဆိုတာ ခွဲခြားလို့ မရတော့ပဲ - မိုးခါးရေသောက်သူ နဲ့ မိုးခါးရေခိုးသောက်သူ ဆိုပြီး အုပ်စုနှစ်စုပဲ ကျန်ခဲ့တော့တယ် - ဒါပေမယ့် အုပ်စုနှစ်ခုလုံးကတော့ မိုးခါးရေ သောက်ကြတာချင်း တူတူပါပဲ -
အဲ့ဒီ့ အုပ်စုနှစ်ခုရဲ့ ကြားထဲမှာ အရင်လို မိုးခါးရေ လုံးဝမသောက်သူ လူတစ်စု ရှိနေသေးတယ် ဆိုတာကိုတော့ လူတိုင်း သတိမပြုမိကြတော့ဘူး - သတိပြုမိသူတစ်ချို့ ရှိပေမယ့် တစ်ချို့က ခေါင်းညိမ့် အသိအမှတ်ပြုယုံလောက် ပြုံးပြပြီး တစ်ချို့ကတော့ လူထန်းလူဆန်းတစ်ယောက်လို သနားစရာ အကြည့်နဲ့ နှုတ်ဆက်စကား ပြောကြတယ် - ခပ်ဝေးဝေး တစ်နေရာရောက်တော့ သူတို့ ခါးကြားက ရွှေရောင်ကွပ်ထားတဲ့ ဗူးတစ်ဗူးကို ခပ်သာသာဖြုတ်ပြပြီး နှုတ်ခမ်းဝမှာတေ့တယ် - ဆိုလိုတာကတော့ ခပ်စုတ်စုတ် မင်းဘဝကို အရောင်မြှင့်တင်ပေးဖို့ ဆိုတာ ဒီထဲက မိုးခါးရေကပဲ တတ်နိုင်သတဲ့
ကျုပ်လား ဟုတ်တယ် - ကျုပ် ခပ်စုတ်စုတ် လူတစ်ယောက်ပဲ - ဒါပေမယ့် ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ မိုးခါးရေ မသောက်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ် - ဒါပေမယ့်လည်း ကျုပ် ဘယ်လောက်ထိ တင်းခံနိုင်မှာလဲ - လူတန်းစေ့ နေနိုင်ဖို့လိုတဲ့ ကျုပ်မိသားစု အတွက် လွင်တီးခေါင်ပြင်ထဲမှာ ကြာရှည် ကျုပ်ရပ်နေလို့ ဖြစ်ပါတော့မလား - အထဲမှာ ရေညှိတက် ပေကျံနေတာ သူတို့ မသိကြပေမယ့် ရွှေရောင်ကွပ်ထားတာကို မြင်တော့ ကျုပ်ရဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းက ဒါကို အာသာငမ်းငမ်း လိုလားနေကြပြီ - ပတ်ဝန်းကျင်က ရိုက်ခတ်တဲ့ စကားသံတွေ - အပြိုင်အဆိုင် အလကားပေးနေတဲ့ မိုးခါးရေပုလင်းတွေ ကြားထဲမှာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရတဲ့ သန့်စင်မှုတစ်ခုအကြောင်း နာမဝိသေသနတွေ အလျှံအပယ်သုံးပြီး ကျောက်သင်ပုန်း တစ်ချပ်ပေါ်မှာ ကျုပ်တန်ဆာဆင်ပြလို့ မရတော့ဘူး - အဲ့လိုနဲ့ တစ်နေ့ - ကျုပ်ခါးကြားမှာ ရွှေရောင်ကွပ်ထားတဲ့ ဗူးတစ်ခု သူတို့ တွေ့ခဲ့ကြတော့မင်း ခုတော့ မိုးခါးရေ သောက်နေပြီ မလား ဆိုတဲ့ အကြည့်နဲ့ အချင်းချင်း အရွှန်းဖောက်ကြတယ် - ကျုပ် ခပ်လျော့လျော့ ပြုံးပြဖြစ်ပါတယ် - ဟုတ်မှာပါ - သူတို့ အမြင်မှာတော့ ကျွန်တော်လည်း အခု မိုးခါးရေသောက်သူများ အုပ်စုဝင် တစ်ယောက်ပေါ့ -
ဒါပေမယ့် သူတို့ လက်ခံထားကြတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သူတို့ သတိမထားမိလိုက်တဲ့ အုပ်စုအသစ်တစ်ခု ဖြစ်တည်လာတာကိုတော့ သူတို့ အားလုံး သတိမထားမိလိုက်ကြဘူး - အဲ့အုပ်စုအတွက် နာမည်ကို တစ်ချိန်က ရှင်းပြခွင့် မရခဲ့တဲ့ ကျောက်သင်ပုန်းတစ်ချပ်ပေါ် တိတ်တဆိတ်ရေးပြီး ဘယ်သူမှ မသိနိုင်တဲ့ တစ်နေရာမှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖွက်ထားလိုက်တယ် - နောက်ပြီး ကျောက်သင်ပုန်း ရှာနေသူ တစ်ယောက်လို ဘဝကို ဖြတ်သန်းခဲ့တယ် - ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီ့ နာမည်ကို တစ်ခြားသူတွေ မသိကြပေမယ့် သူကိုယ်တိုင်တော့ ခဏခဏ ပြန်ပြန်ရွတ်လေ့ ရှိတယ် - အဲ့နာမည်က -
" မိုးခါးရေပုလင်း ချိတ်သူများ "
TechSectors Blog သည် Mynamar Unicode စနစ်အား အသုံးပြုထားပြီး မြန်မာဖောင့်မရှိသည့် ဖုန်းများ/ကွန်ပျူတာများတွင်ပါ မြန်မာလိုမြင်တွေ့နိုင်စေရန် ဖန်တီးပြင်ဆင်ထားသည့်အတွက် စာဖတ်သူအနေနှင့် မှတ်ချက်ရေးသားလိုပါက မြန်မာယူနီကုတ်စနစ်ဖြင့် အသုံးပြုရေးသားရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ အကယ်၍ ဇော်ဂျီဖြင့်သာ ရေးသားလိုပါက http://www.rabbit-converter.org/Rabbit/ တွင် ZawGyi မှ Unocode သို့ ပြောင်းလဲ၍ ​ဤ ဘလော့တွင် ရေးသားမှတ်ချက်ပြုနိုင်ပါသည်။
Windows 10 & Myanmar Fonts (Unicode + Non-Unicode) Installation Guide
Windows 10, Myanmar Fonts and Configuration Settings Review ဆိုပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ် Windows 10 ပေါ်ခါစတုန်းက စရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့နောက...
Software Installation Guide for Ubuntu 10.04 LTS
Ubuntu 10.04 LTS မှာ လိုအပ်တဲ့ Software တွေ ဘယ်လို Install လုပ်မလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို နားလည်လွယ်အောင် ကျွန်တော် ဖော်ပြသွားပါ့မယ်။ ပုံမှန်အား...
How To Add Burmese Page Number in Microsoft Word 2013
Microsoft office 2007 -- microsoft word နဲ့ ပတ်သက်ပြီးမေးချင်လို့ပါ။ header ထဲမှာ စာမျက်နှာ နံပါတ်ကို မြန်မာဖောင့်နဲ့ နံပါတ်စဉ်လိုက် တပ်ချင်...
Windows 10, Myanmar Fonts and Configuration Settings Review
Windows 10 ကို Virtual Box နဲ့ စမ်းသုံးကြည့်လိုက်တော့ အမြင်အားဖြင့် ဘာမှ သိပ်ထူးခြားမှု မရှိသလို ထင်ရပေမယ့် လက်တွေ့မှာ အပြောင်းအလဲ အတ...
( MM versions ) Computer ebooks collection
ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်ရပ်တည် ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ အင်တာနက်ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာ English လိုရေးထားတဲ့ နည်းပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Ebooks တွေများသလောက် - မြန်မ...
Outlook 2010 with Myanmar Font
ကျွန်တော်လည်း ဖိုရမ်ပြင်ဆင်ရေး ဘက်လှည့်နေလို့ ဒီဘက်မှာ သိပ်မရေးဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတယ် - မေးထားတာတွေ တော်တော်များများလည်း ပြန်မဖြေပေးနိုင်သေးဘ...
USEFUL TIPS TO LEARN ENGLISH EFFECTIVELY
အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံတစ်ခုမှာ အခြေချဖို့ (အခြေချဖို့ဆိုတာမှာ အလုပ်လည်းလုပ်ရသလို၊ ရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ ပညာကိုလည်းရှာဖွေနေရတဲ့ သူမျိုးကို ဆိုလိုတာ...
Zawgyi & Unicode Guide for Windows 10
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူ အများစု Windows 10 ကို ဦးစားပေး သုံးလာကြတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း လက်ရှိ Windows 10 ပဲ သုံးပါတယ်။...
Ubuntu ( Linux ) for All
ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းအရာကို ရေးချင်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို ရေးပြီလို့ ဆိုတော့ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အကြောင်း အရာကို အစမပျိုးခင်မှာ ပ...
(65) Basic Dhamma Questions That Every Buddhism Should Know
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း သိနားလည်ထားသင့်တဲ့ ဗုဒ္ဓဓမ္မဆိုင်ရာ အခြေခံမေးခွန်းလေးတွေကို ကိုနေရွှေသွေးအောင် ကနေတဆင့် ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဒေါ...
Anki Flash Cards
LearnEnglish for Adults - British Council
LearnEnglish for Teens - British Council
LearnEnglish for Kids - British Council
LearnEnglish for Teachers - British Council
Ma KyaeMone English
Reading and Self Learning
Windows Experience Index: An In-Depth Look
New Channels for Firefox
How To Convert Webpages To Clean PDF
Gmail with custom background image themes
First Platform Preview of Internet Explorer 10
Best “Microsoft Fix it” Troubleshooters
Windows 8 And The Future Of Computing
Myanmar culture and heritage
Fresh Dynamic Views For Your Blog
Copyright © 2014 TechSectors. Designed By Techsectors.